Jiangxi Sanjia Craft Gift Co., Ltd. yasekwa ngo-2018, ezihlangwini zayo, Koonmei Craft Products yasekwa ngo-2005 e Shenzhen. Umzi mveliso wethu ngoku ugubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-4,000 +. Kufutshane neChibi lasePoyang elilelona chibi likhulu lamanzi e-China, umzi-mveliso wethu uyakonwabela ukuthuthwa okufanelekileyo kunye nemeko entle. Njengomvelisi wamava atyebileyo kumzi mveliso wobugcisa bentsimbi kunye nezipho, sigxile ekuveliseni iimveliso zesiko kubandakanya izikhonkwane ze-enamel, izikhonkwane ze-lapel, ibheji kunye nomfuziselo, izitshixo, iimedali, iingqekembe, iithegi zenja, amanqaku encwadi, njl.
Ngothungelwano olupheleleyo lweshishini, sinokubonelela ngenkonzo enye yokumisa kwaye sigqibe ngokuzimeleyo yonke inkqubo yemveliso kubugcisa bedijithali, ukwenza iinkqubo, ukubumba, ukulahla ukutya, ukunyathela, ukupeyinta, ukupeyinta, ukugoba, ukuhlanganisa i-QC kunye nokupakisha. Oku kusinika ithuba elihle ekuboneleleni ngolawulo lweendleko ezichanekileyo kunye nolawulo lomgangatho kubathengi abaneendawo ezahlukeneyo zokubeka kwimarike.
Ngeli xesha, siphumelele izatifikethi ze-ISO9001 kunye ne-TUV. Uninzi lwabasebenzi bethu abanezakhono banamava angaphezu kweminyaka eli-10 kule nkalo kwaye benza igalelo elikhulu kwinkampani yethu ekunikezeleni ngenkonzo yobungcali kunye neemveliso ezonelisekileyo kubathengi bethu abathandekayo ekhaya nakwamanye amazwe.
-Alibaba Umthengisi oqinisekisiweyo;
-Ifektri eQinisekisiweyo ye-ISO kunye neTUV;
-Ukuxhotyiswe ngokupheleleyo ngeNkonzo yokuSebenza eKhosi enye;
-Igumbi lakho lokugcina ngokwakho-imibala eyahlukeneyo yesingxengxe iyafumaneka;
-Ukubala ngemitshini emitsha yakutshanje, ukubonelela ngokusebenza okuphezulu;
Ubungqina bobugcisa bobugcisa kunye nohlaziyo;
Iisampulu zesiko zasimahla, ngaphandle kokungunda kunye nokuhambisa;
-Ukunikezela ngoVavanyo lweXesha langempela ngeFoto okanye ngeVidiyo ngaphambi koThutho;
Abasebenzi abaqeqeshiweyo bahlala befumaneka kwi-Intanethi ukuze bakhonze.
Ibango lakho yinjongo yethu, ukoneliseka kwakho kukusukela kwethu, impumelelo yakho yeyona nto siyonwabileyo!
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi nangaliphi na ixesha ukuxoxa ngeprojekthi yakhos.
I-TUV iRheinland c2
I-TUV iRheinland c1